Vaovao - Ny firoboroboan'ny indostrian'ny fanontana
Ny firoboroboan'ny indostrian'ny fanontana
Ny vinavinan'ny indostrian'ny fanontam-pirintin'i Shina ao anatin'ny dimy taona ho avy dia maminavina ny fiovan'ny toe-karena ara-toekarena ao Shina, ny fanitsiana ny firafitry ny indostria, ny fihenan'ny tombotsoan'ny indostrian'ny fanontana, firy ny fanontam-pirinty sy fonosana fonosana mila mamaha ny olan'ny fitsambikinana ny olana. Ary ny indostrian'ny fanontam-pirinty amin'ny ho avy dia ho karazana fitarihana fampandrosoana, asehoy ny karazana firoboroboan'ny fampandrosoana, ary lasa olana ara-pahaizana ihany koa.
Voalaza fa ny fironana amin'ny indostria dia "fiovana iray ao anatin'ny 5 taona". Raha ny hevitro, ny firoboroboan'ny orinasan-dasona sy fanontam-pirinty lehibe hatreto dia afaka maminavina ny fahatsinjovan'ny tsena ny làlan'ny fampandrosoana ny fanontana sy ny fonosana any Shina ao anatin'ny 5 taona ho avy.
Tsy azo ihodivirana ny fampidirana ireo zavamaniry fanontana sy fonosana
Tatitra fanadihadiana farany momba ny angona vaovao: Miakatra ny vidin'ny orinasa sinoa, saingy ny tombom-barotra amin'ny varotra dia latsaka ambany indrindra amin'ny tantara.
Raha ny zava-misy dia tsy afaka misoroka ny toe-javatra ankapobeny ny indostrian'ny fanontana ary mijaly noho io toe-javatra io ihany. Miakatra ny sandam-bolan'ny zanak'olombelona, ​​ny vidin'ny fanofana tranombarotra na ozinina dia tsy miakatra fotsiny, fa ny tombony amin'ny fonosana sy ny fanontana dia mihena be.
Noho ny tsy fisian'ny tombony amin'ny fifaninanana dia miady amin'ny fifaninanana vidiny ny orinasa sasany mba hitazomana ny fahavelomany eo amin'ny tsenan'ny varotra. Orinasa mpanonta fonosana kely sy salantsalany no manidy ny fivarotany ary miala amin'ny tsenan'ny varotra ao anatin'ny fiakarana. vidiny sy fihenan'ny tombom-barotra.
Saingy tsy ny fandosirana na ny ady mafy no vahaolana farany. Miaraka amin'ny fanavaozana sy ny fanovana ny indostrian'ny famonosana sy ny fanontana dia ho maro ny zavamaniry fanontam-pirinty kely sy salantsalany hihaona amin'ny fampidirana ireo lalana roa ireo.
Nanjary fironana tsy azo ihodivirana ny fanatsarana ny milina sy ny fitaovana
Ahoana ny amin'ny fiakaran'ny vidim-bolan'ny olombelona? Raha tsy te-handoa vola be amin'ny mpiasa ianao dia tsy maintsy mampitombo ny vokatra.
Ary ny lakileny dia ny fanatsarana ny masinin'ny orinasa. Manatsara ny masinina sy ny fitaovana ary ny haitao ary manolo ny renivohitra amin'ny tsindrona renivohitra mety dia ny làlana ho avy.
Fa maninona no mora kokoa ny mampiasa vola amin'ny milina sy fitaovana ara-teknika noho ny amin'ny mpiasa?
Koa satria i Shina dia eo amin'ny fihemorana ara-toekarena amin'izao fotoana izao dia somary ambany ny vidin'ny tsininy ny milina sy ny fitaovana. Ny fanoloana ny asa amin'ny milina sy fitaovana dia fanatsarana vetivety amin'ny fizarana fananana raikitra. Na izany aza, noho ny fahombiazan'ny milina sy ny fitaovana hatrany dia ho tratra ny fahombiazana avo lenta.
Mandritra izany fotoana izany, ny vanim-potoana samihafa amin'ny tsenan'ny varotra dia manana fitsipika momba ny fanontana fonosana, taratasy fanontana, fanovana teknolojia fanodinana, fanatsarana ny milina sy ny fitaovana afaka mifanena amin'ny tsena fivarotana haingana araka izay tratra.
Ampiasao zava-dehibe ny fanatobiana entana sy ny fanandramana ataon'ny mpanjifa
Azonao ve? Ny teny hoe "namboarina" dia miorim-paka lalina ao am-pon'ny mpanjifa, ny fonosana sy ny fanontana namboarina dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa ankehitriny.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny Internet sy ny fanatsarana ny lalàna mifehy ny maha-olona, ​​ny habetsaky ny fonosana sy ny fanontana dia nihena tsikelikely. Mba hanasongadinana ny maha-izy azy, maro ny mpanjifa no vonona kokoa ny hampanjifa ny entana sahaza ho azy ireo, na eo amin'ny nomerika lehibe aza. fonosana fanontam-pirinty entana, ny zavatra vita pirinty dia mety ho hafa tanteraka amin'ny olona tsirairay, ka mahatonga ny olana tsy mitovy sy ny mahaolona.
Noho izany, ny orinasa dia tokony hanao izay fara heriny hanomezana ny mpanjifa serivisy fanandramana miorina amin'ny toetrany sy ny zavatra ilainy.
Ny fanontana fonosana nomerika + lehibe dia lasa làlana vaovao
Ny valin'ny firoboroboan'ny fampandrosoana eran'izao tontolo izao dia mampiseho fa amin'izao fotoana izao, ny 85% amin'ireo orinasa mpanonta fonosana serivisy ara-barotra eran'izao tontolo izao dia afaka manome serivisy fanontana nomerika lehibe, izay 31% amin'ireo orinasa mpanonta fonosana serivisy dia nilaza fa mihoatra ny 25% ny ny vola miditra amin'ny asa lehibe amin'ny fanontana pirinty nomerika lehibe. Ity tatitra ity dia "mitanjaka" hampahafantarana amin'ny rehetra fa tsy mitsaha-mihatsara ny tsenan'ny varotra ho an'ny fanontana nomerika nomerika lehibe.
Amin'ny ankapobeny, amin'izao dingana izao, ny fanontana nomerika nomerika lehibe ao Shina dia mitentina 1% fotsiny, fa miaraka amin'ny fanatsarana ny fikatsahana fahatsiarovan-tena tanteraka sy ny fanatsarana ny lalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny vidin'ny famokarana sy ny famokarana ny orinasa fanontana nentim-paharazana dia miakatra, ary noho izany ny fanontam-pirinty nomerika lehibe dia mihatsara amin'ny teknolojia isan'andro isan'andro. Amin'ny vanim-potoana manaraka, ny fanontana nomerika nomerika lehibe dia hampidirina amina saha marobe fanontam-pirinty isan-karazany, ary ny orinasam-panontana fonosana dia hisafidy lehibe ihany koa isan'ny fanontam-pirinty nentim-paharazana mba hampitomboana ny fanontana nomerika nomerika, hamaly ny fanovana takiana amin'ny tsena fivarotana.
Avelao hiditra an-tsehatra amin'ny haitao sy ny fitantanana ny haitao amin'ny Internet
Ny indostrian'ny e-varotra dia manana fahatakarana tsara momba ny teknolojia Internet. Tao anatin'izay taona vitsivitsy izay, ankoatry ny fivarotana an-tserasera, ny orinasa fanontam-pirinty sy ny fonosana dia mifaninana ihany koa amin'ny fanokafana fivarotana an-tserasera miorina amin'ny e-varotra hanitarana ny faritra fivarotana tsena. Mikasika ny akora, ny fikojakojana ny fifandraisan'ny mpanjifa ary ny tombom-barotra amin'ny orinasa dia miankina hatrany amin'ny angon-drakitra ho an'ny fanadihadiana izy ireo, mba hahitana fanovana marina kokoa amin'ireo fanovana.
Raha ny hevitro dia hitombo io fironana fampandrosoana io fa tsy hihena ao anatin'ny dimy taona. Orinasa fanontam-pirinty sy fonosana maro an'isa no hamindra ny orinasan-dohany amin'ny Internet. Mandritra izany fotoana izany dia hampihatra angon-drakitra lehibe izy ireo handinihana ireo angona sy hampiroboroboana ary hivarotana ny vokatr'izy ireo miaraka amin'ny toe-tsain'ireo mpiserasera.
Noho izany, ny fakana loharanon-karena an-tserasera sy ahafahan'ny fantsom-pifandraisana an-tserasera dia fepetra ilaina ho an'ireo orinasa famonosana sy fanontana hitady fitarihana fampandrosoana ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Amin'ny fonosana plastika malefaka, ny sarimihetsika plating aluminium ampiasaina matetika dia mizara ho sokajy roa, ny plating aluminium CPP, ny plating aluminium PET, saingy noho ny fiakaran'ny horonantsary aluminium dia mora ny miseho ny famindrana plating aluminium, izay miteraka fatiantoka lehibe amin'ny orinasa famonosana maro. , Ity taratasy ity, manomboka amin'ny binder, dia mametraka vahaolana samihafa hisorohana ny famindrana sarimihetsika plating aluminium.
1. Adhesive polyurethane misy singa roa
1) Adhesive manokana ho an'ny sarimihetsika plating aluminium no raisina
Ny famotsorana sy ny fametahana solosaina tsy dia tsara loatra dia mora manenika ny sosona vita amin'ny aluminized, misy fiantraikany amin'ny haingan'ny sosona aluminized, maina ny volo raha ratsy ny vokatra, be loatra ny residue solvent, aorian'ny fanasitranana ny herin'ny fametahana dia hihena, na ny famindrana aliminiana aza dia tokony hifidy. lanjan'ny molekiola sahaza, famotsorana solvent tsara, sarimihetsika plating vita amin'ny alimika mitovy amin'ny hery matanjaka avo dia tsy adhesives manokana.
2) apetaka amin'ny lakaoly mety
Ny habetsaky ny lakaoly dia lehibe, mora ny mahatonga ny fanamainana vokany tsy tsara, ka ny miraikitra miraikitra amin'ny coating aluminium, ary koa manitatra ny fotoana fanasitranana, mora miseho aluminium famindrana fisehoan-javatra, ka ny habetsaky ny lakaoly dia tokony hofehezina amin'ny toerana mety, raha ny fanandramana fanaraha-maso ankapobeny amin'ny 2 ~ 2.5g.
3) Fampihenana ny mpitsabo mpanasitrana
Hatsarao ny halon'ilay fonosana adhesive, fa koa hisorohana tsara ny famindrana ny firakotra aluminium, izay matetika ampiasaina mba hampihenana ny habetsaky ny mpitsabo manasitrana, io toe-javatra io dia azo ampiasaina amin'ny fonosana maivana sy ny fitaky ny angovo takiana amin'ireo vokatra, ireo vokatra vita amin'ny alimo polyester hatreto araka izay azo atao mba tsy hampiasa io fomba io.
4) Hatsarao ny hafanana maina sy ny hafainganan'ny rivotra amin'ny lalan'ny maina
Amin'ny fizotry ny fanodinana horonantsary vita amin'ny alimina, dia tokony hanatsara ny mari-pana maina ny lalan-dry maina, ohatra, hampiakatra 5-10 degre, ary hiantoka ny hafainganan'ny rivotra amin'ny 5 metatra / s eo ambony, ataovy miovaova tanteraka ny solvent, ahenao ny solvent residu, ho fanampin'izany dia afaka mampiasa jiro avo ihany koa, ny fonosana fifantohana avo lenta ihany koa.
5) Ampitomboy ny mari-pana itsaboana ary hanafohezana ny fotoana fanasitranana
Ireo vokatra vita amin'ny horonantsary vita amin'ny aliminioma amin'ny fizotran'ny fanasitranana dia tokony ho mety hanatsara ny mari-pana amin'ny fanasitranana, hanafohezana ny fotoana fanasitranana, mba hampihenan'ny adhesive ny fidiran'ny fahasimban'ny firakotra aluminium, hisorohana tsara ny famindrana ny firakotra aluminium, ny mari-pahaizana ankapobeny 50-60 degre , fotoana ao anatin'ny 24 ora na mihoatra, sorohy ny fitsaboana maharitra.
6) Mampiasà sarimihetsika plating vita amin'ny aliminioma
Raha avela ny vidiny, dia mividia sarimihetsika vita amin'ny alumnique avo lenta, toy ny fonosana fototra.
2. Adhesive miorina amin'ny rano
1) ho an'ny fonosana vokatra maivana, toy ny sakafo puffed, paty eo no ho eo ary ny famokarana hafa, ny fitaovana ampiasaina amin'ny fametahana alimina CPP, amin'ny ankapobeny mba hifehezana ny vidin'ny famokarana, ny fampiasana ny adhesives azo avy amin'ny rano tokana, amin'ny dingan'ny famokarana ho an'ny maro. taona maro, ny olana momba ny famindrana ranomainty ihany no nipoitra, ary ny famindrana aliminioma, tamin'izany fotoana izany tamin'ny fanandramana tena izy, aorian'ny fahitana ny tavy peel mitambatra dia hita ao anatin'ny 1 ON / mihoatra ny 15 mm, afaka mahafeno ny fenitra momba ireo vokatra fonosana ireo.
2) Mampiasà adhesive miorina amin'ny rano hamokarana vokatra vita amin'ny aluminized, ny roller aniline dia mampiasa tsipika 200, ny haben'ny lakaoly dia fehezina amin'ny 1.2 ~ 1.8 grama, mba hiantohana ny fitoviana mitovy amin'ny fonosana, ny vokatra fanamainana tsara, izay tsy mampihena ny famokarana fotsiny vidiny amin'ny lafiny iray, fa koa hamaha amin'ny laoniny ny olan'ny reside solvent, hiantohana ny famokarana mpanjifa ara-dalàna. Avereno ny tara raha misy vokany ratsy be loatra ny solvent residual. Mandritra izany fotoana izany ho an'ny vokatra ranomainty feno dia tena mety indrindra ny vokany .